Manazava ireo tranga ireo ny Semalt Expert mba hiarovana anao amin'ny hosoka amin'ny aterineto
Tokony ho fantatrao amin'ny fehezan-dalàna sy ny tranganà aterineto ianao, sa tsy izany? Ireo roa ireo dia ampiasaina amin'ny fifanakalozan-kevitra ary mitovitovy amin'ny zavatra iray ihany. Ny tranga iray dia manondro ny fandaharan'asa iray natao hanodinkodinana ny volan'ny olona amin'ny volany matetika amin'ny fampanantenana zavatra iray izay tsy mampiaraka na oviana na oviana rehefa manova tanana ny vola. Araka ny soso-kevitra, ny fianjera amin'ny aterineto dia mikendry ireo mpitsidika aterineto.
Ny mpiandraikitra ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt , Lisa Mitchell, dia mamelabelatra ireo olana momba ny hosoka amin'ny aterineto mba hahatonga anao ho voaro amin'izany.
Iza no atahorana?
Ny olona rehetra mampiasa ny serivisy amin'ny aterineto amin'ny fotoana rehetra sy avy any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao dia mety. Tsy mampaninona anao ny manamarina lahatsoratra ao amin'ny famoaham-baovao sosialy, mailaka na fifanakalozan-kevitra amin'ny tranonkala mampiaraka - kbb motorcycle. Hatramin'ny nahaterahany dia nanampy olona an-tapitrisany ny mijery horonantsary, mahazo vaovao, mamaky bilaogy, miasa any an-trano ary mihoatra noho izany. Indrisy fa nihabetsaka ny raharaha heloka bevava cyber.
Tamin'ny taona 2017, ny isan'ny tranga momba ny heloka bevava dia voalaza fa 155% noho ny tamin'ny taon-dasa (2016). Tsy tsara izany. Ahoana no nahatonga izany? Azo antoka fa tokony ho tsapantsika ankehitriny ny hadisoana rehetra ampiasaina, sa tsy izany? Eny ary, sangisangy ireo olon-dratsy. Isan'andro izy ireo dia misy fomba vaovao hijinja izay tsy nafafiny.
Raiso ny ohatra navelan'ny Nizeriana 419..Matetika izy io dia manomboka amin'ny mailaka na hafatra nalefan'ny zazavavy iray tao anatin'ny fahoriana. Mandainga izy ho mpirahalahy, tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta na orinasa iray avy any Nizeria na Sierra Leone. Ankehitriny dia ity no entana: ny vehivavy dia maniry ny hanampy azy haka ny volany amin'ny banky eo an-toerana. Ahoana? Amin'ny alàlan'ny fandefasana karama izay arosany amin'ny saram-pandraharahana amin'ny banky. Inona no azonao atao? Ampahany betsaka amin'ny vola. Tsy mitranga izany. Raha vao mandefa ilay vola ianao, dia lasa any anaty rivotra ilay ramatoa. Amin'ny toe-javatra hafa dia mety hangataka ny antsipiriany amin'ny banky miaraka amin'ny filazana fa te-handefa ny vola amin'ny kaontinao izy ireo. Aza manao an'izany. Hanjavona ny kaontinao amin'ny banky. Raha toa ka toa tsara loatra ny zavatra azo tsapain-tanana, dia misy olona mitandrina ny rivotra ary milalao.
Ny famonoana ny famonoana
Ity dia azo antoka fa ny karazana tranga mahazatra indrindra any. Amin'ity tranga ity dia mahazo mailaka ofisialin'ny banky ianao na amin'ny tolotra antserasera an-tserasera toy ny Paypal. Te hilaza izy ireo fa tokony havaozina ny kaontinao. Eto izy ireo dia hanosika anao hanindry ny rohy na hanome ny antsipirihanao mba hanavaozan'izy ireo koa izany ho anao. Ny famandrihana phishing dia ampiasaina mba hangalarana angona manokana sy vola.
Asehoy ity fampitahana ity: raha misy olona nangalatra ny karamanao avy amin'ny kitaponao, dia niantso ny banky ianao mba hampahafantatra azy ireo. Mampalahelo fa sarotra ny heloka bevava cyber fa tsy hoe tsotra. Na izany aza, afaka miaro ny tenanao amin'izany rehetra izany ianao amin'ny alalan'ny fahafantaranao ireo karazana olana amin'ny aterineto. Hanome anao fiadanan-tsaina izany, ny mombamomba anao manokana dia hitoetra ho voaro, ary tsy hisy olona hikasika ny volanao raha tsy nahazo alalana ianao. Aza mijery Internet. Ankafizo ny fahafahan'ireo Internet amin'ny fiadanan-tsaina.